google pixel 6 kuburitsa zuva, mutengo, maficha, uye nhau
Kuru Nhau & Ongororo Google Pixel 6 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha, uye nhau
Google Pixel 6 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha, uye nhau
Kana zvasvika pakusunungurwa kwe smartphone Google haina kunyatso kuzivikanwa nekugona kwayo kuchengetedza chakavanzika. Iyo Pixel 5 ichiri nyowani asi kudonhedza nezve iye akamutsiva vatove nemafashama nzvimbo yepamhepo. Zvinotaridza kuti Google & apos; s mobile hardware roadmap yabuda uye ikozvino maapos anotenderera kutenderera webhu, ichigadzira hype uye ichiwedzera guhwa. Iyo Pixel 6 ichave iri chaiyo mureza? Zvakadii nerunyerekupe foldable Pixel foni ?
Mureza Google Pixel 6 uye Pixel 6 Pro inodonhedza ine radical nyowani dhizaini Mifananidzo yezviitiko zve5G Pixel 6 uye Pixel 6 Pro mechi dzinopa mafoni matsva Nyowani Pixel 6 uye 5a makuhwa: Whitechapel chip mashandiro, ruvara rwegirini, uye mutengo
Pane mazita matatu emakodhi akataurwa mugwaro rakaburitswa - 'gunguo,' 'oriole,' uye 'pasipoti.' Isu tinotenda kuti 'gunguo' uye 'oriole' inogona kunge iri iyo Pixel 6 uye iyo Pixel 6 XL, nepo 'pasipoti' iine mukana unonakidza wekuona chakapetwa chishandiso chine G brand pairi. Ehezve, chaiye kana kwete, аmepu chimwe chinhu chisina chokwadi uye chakasununguka muhunhu hwayo, saka tora ruzivo rwese nerutsanga rwune munyu.
Zvakadaro, isu & apos; takanyora zvese zvatinoziva nezvePixel 6 neGoogle & apos; zvirongwa zve2021. Ngatitorei maapos apinde mukati chaimo!
Google Pixel 6 Mutengo
Google Pixel 6 Kuburitswa zuva
Google Pixel 6 Magadzirirwo
Google Pixel 6 Dhizaini uye Ratidza
Google Pixel 6 Kamera
Mutengo weGoogle Pixel 6 ndechimwe chezvinhu zvinonakidza zvekufungisisa nezvazvo. Google yakabuda-kunze nePixel 4 uye 4XL ichirova mutengo wekumusoro kune aya mamodheru (iyo Pixel 4XL 128GB inodhura $ 999) asi ipapo kambani yakatora nhanho kumashure ne Pixel 5 , ichichiita chimwe chinhu chepamusoro wepakati-renhare foni ine $ 699 mutengo weti.
Pane zviri pachena nzira mbiri kumberi maererano nemutengo wePixel 6. Google inogona kuda kudzokera kuchikamu chepremium uye kutora kurwira kune vakomana vakuru. Mune ino mamiriro, isu tinofanirwa kutarisira mutengo mune iyo $ 899-999 renji.
Kune rimwe divi, kana Google inoronga kuburitsa yakapeta foni muna 2021, kambani inogona kungobata mabhiza ayo paPixels yakajairwa, uye zvakanyanya kukosha, mitengo yavo. Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezve chimwe chinhu chiri padyo ne $ 799 yemuenzaniso wepasi wePixel 6. Pane chechitatu sarudzo, futi. Google ingangoda kuchengeta iyo $ 699 'inokwanisika' mutengo weti nePixel 6 - inoodza mwoyo kune imwe nhanho, sezvo izvi zvichizoshandura kuva yepakati-renhamba specs.
2020 raive gore rakapenga, pasina mubvunzo, asi Google yakakwanisa neimwe nzira kukodzera chiziviso chaPixel 5 muhwindo rayo rekuburitsa. Izvo zvakaziviswa zviri pamutemo musi waGunyana 30 uye zvakatengeswa mwedzi wakatevera. Tichitarisa kumberi muPixel mafoni ekutanga nhoroondo tinoona kuti Google yakanaka zvinoenderana nemisi uye isu tinofanirwa kutarisira iyo Pixel 6 foni kuti ibude-kumusoro munaGumiguru 2021.
Paive nemamwe makuhwa ekutanga kwekuzivisa kwaKurume (izvo zviri pachena kuti hazvina kuitika & apos; hazviitike) uye zvinogona kuburitswa muZhizha, asi parizvino hapana ruzivo runotsigira runyerekupe urwu. Iko hakuna chikonzero chekutarisira kuti iyo Pixel 6 ichafumurwa pairi Google I / O , zvichiitika May 18-20, chero.
Google Pixel mafoni anotangisa nhoroondo
Pixel - Gumiguru 4, 2016
Pixel 2 - Gumiguru 4, 2017
Pixel 3 - Gumiguru 9, 2018
Pixel 4 - Gumiguru 15, 2019
Pixel 5 - Gunyana 30, 2020
Qualcomm yakatotanga chirongwa chayo chinotevera chipset - iyo Snapdragon 888 . Nekudaro, mukana wekuti isu tione iyi silicon mukati mePixel 6 inoita kunge iri kuramba ichingoitika. Kuburitsa kuchangobva kuitika kwave kuwedzera, kuchitipa chechitatu chinokwanisika, uye parizvino, mamiriro angangoitika eSoC muPixel 6. Tiri kutaura nezve Chipu chakagadzirwa neGoogle chine codename Whitechapel , mukati inozivikanwa se'GS101 '.
Chip inobata ingangopa Google zvayakanakira, sezvo ichibvumidza kutonga pamusoro pehardware nekubatana kwakasimba neiyo sisitimu inoshanda. Zvisinei, runyerekupe rwazvino uye kubuda kunofungidzira kuti chipu cheWhitechapel hachikunde & apos; chive chinokurumidza kupfuura Snapdragon 888.
Isu tinoziva zvakare kuti iyo Pixel 6 ichave inoratidzira iri-pasi-kuratidza zvigunwe zvigunwe, inova yekutanga yefoni yeGoogle, uye pamberi pekamera runyerekupe kutsigira 4K vhidhiyo yekurekodha. Parizvino, mazhinji mamwe maPixel 6 specs haasati ave kuzivikanwa.
Mumwe mukuru mubvunzo mucherechedzo wakarembera pamusoro pechiratidziro uye nemwero wayo wekuzorodza. Yepamusoro yekuvandudza mwero mapaneru anga ari iwo chiratidzo che2020 uye mikana Google icha sarudza kanenge 90Hz pani yePixel 6. Kunyangwe iyo kambani ichaenda yese-kunze ndokupa iyo 120Hz kana yepamusoro yekuzorodza rate screen mune yayo inotevera mureza haisi kujekesa panguva ino. Isu tinotarisira kuti bhatiri kugona kuve ingangoita 4,000 mAh - zvinoenderana nePixel 5 modhi. Kana Google ikasvetuka pane imwe chipset ine simba-rine simba, tinogona kuona bump munzvimbo iyoyo, futi asi & apos; zvisingaite. Iyo Pixel 6 ingangozvirumbidza iyo yakafanana 8GB / 128GB RAM uye yekuchengetedza dhizaini seyakatangira.
Google yakasarudza iyo yemasanganiswa yealuminium muviri ine yakatetepa 'ganda' rakagadzirwa yakakosha bioresin plastiki yePixel 5 uye iyi combo yakapa foni yakachena uye yakataridzika chitarisiko. Mhuri yePixel 6 zvisinei, ichatamba zvakasiyana zvakasiyana dhizaini uye dhizaini dhizaini.
Uyezve Verenga: Mureza Google Pixel 6 uye Pixel 6 Pro inodonhedza ine radical nyowani dhizaini
Iyo Pixel 6 ine runyerekupe rwekuti ive ne6.4-inch flat flat AMOLED kuratidza ichienzaniswa ne6.7-inch curved AMOLED kuratidzwa kunotarisirwa paPixel 6 Pro. Iyo Pro modhi ingangodaro inotora 120Hz zororo reti pani, nepo vanilla Pixel 6 ichange iine 90Hz kuratidza.
ZVIMWE:Jon Prosser, Steve Hemmerstoffer nemamwe ma tipsters uye ma leaker vaburitsa dhizaini yePixel 6 nePixel 6 Pro uye & maapos s shanduko yakakura ichienzaniswa nechizvarwa chakapfuura. Iyo inoratidzira inonakidza kamera bump, kana isu tichifanira kuti titi strip, iyo inowedzera kuburikidza nehupamhi hwese hwefoni. Iko & apos; zvakare iri papaya orenji dhizaini chinhu kumusoro, nepo nzvimbo iri pasi peiyo kamera system iri yakanyanya kudzikiswa colorwise.
Google yanga isingadi kutamba mutambo wenhamba nema camera system mufoni dzayo. Iyo Pixel 5 inoratidzira maviri-kamera system ine inochengetedza yakafara / yekuwedzera-yakasarudzika setup. Tinoda kuona lens yechitatu ichiwedzerwa pamusanganiswa uye mukana weizvi zvichiitika nePixel 6 haisi iyo mutete, chaizvo. Apple irikugadzirira kuwedzera periscope zoom lens mune yayo iPhone 13 akateedzana zvishandiso (zvinoenderana nerunyerekupe rwazvino), uye Google inogona kuita zvakafanana.
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Zvinotaridza kuti Google iri kuzopedzisira yoshandisa nyowani uye hombe sensor yeiyo huru kamera. Yakadonha sketchy inoratidza kuti chishandiso ichi chichava neinonyanya 50MP sensor, ye-ultra-wide-angle unit, uye 8MP periscope telephoto lens ine rutsigiro rwe5x Optical zoom. Takanzwa izvozvi selfie kamera ichatsigira 4K vhidhiyo yekurekodha.
maapplication akaita sungano yenyaya
Iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 7 inouya neyebhuruu mwenje firita sarudzo yakafanana neiyo iPhone & apos; s Night Mode
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve USB 3.1, iyo USB Type-C chinongedzo, uye USB Simba Dhirivhari
Google Mifananidzo zvino inoita kuti iwe ugadzirire manyore kusarudza mapikicha
Verizon iri kutora peji kubva kuT-Mobile & apos; bhuku rekare rekutamba rine inopisa nyowani 5G promo